ကွန်ပျူတာစွမ်းဆောင်ရည်ကိုအခမဲ့စောင့်ကြည့်သောပရိုဂရမ်များ Gadget သတင်း
Paco L ကို Gutierrez | | ယေဘုယျ, ကွန်ပြူတာများ
အဆိုပါ pc သည်မတူညီသောဟာ့ဒ်ဝဲအစိတ်အပိုင်းများဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသောစက်ဖြစ်ပြီး၎င်းကိုမှန်ကန်သောသဟဇာတဖြစ်မှုကိုဖြစ်စေသည်။ သို့သော်အရာရာတိုင်းသည်အမြဲတမ်းအလုပ်လုပ်သင့်သည်။ လိုအပ်သောကိရိယာများသို့မဟုတ်ဗဟုသုတမရှိလျှင်အကျွမ်းတဝင်မရှိသောအသုံးပြုသူများသည်၎င်း၏ချွတ်ယွင်းချက်ကိုလုံး ၀ ထိတွေ့နိုင်သည်။ အကြောင်းရင်းအမှန်ကိုမသိဘဲရင်းမြစ်များအလွန်အကျွံသုံးစွဲမှု။ ပရိုဆက်ဆာသို့မဟုတ်ဂရပ်ဖစ်ပြောင်းလဲမှုသည်စွမ်းဆောင်ရည်တိုးတက်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ အမှန်တကယ်ကောင်းမွန်သောအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိမရှိမည်သို့သိနိုင်သနည်း။ အထူးသဖြင့်ဒီအတွက်ဆက်ကပ်အပ်နှံအစီအစဉ်များအချို့ရှိပါသည်။
၎င်းသည် Gamers များအတွက်တစ်စက္ကန့်လျှင်အများဆုံး frame rate ကိုရှာဖွေရန်လွယ်ကူသော tool တစ်ခုမဟုတ်ပါ၊ ပိုမိုမြင့်မားသော rate နှင့် processor များတွက်ချက်မှုလည်းရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ pc သည်မည်သည့်တွက်ချက်မှုသို့မဟုတ်မှတ်ဉာဏ်လိုအပ်ချက်နှင့်မဆိုရင်ဆိုင်ရသောအခါမည်သို့ပြုမူသည်ကိုကြည့်ရန်လိုအပ်သည်။ မည်သည့်အလုပ်နှင့်အညီအရင်းအမြစ်များစားသုံးမှုနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ကွန်ပျူတာစွမ်းရည်သည်အလွန်အရေးကြီးသည်ဟုဆိုပါမည်။ ဒါအများကြီး ထုတ်လုပ်သူအများအပြားသည်သူတို့၏ကိုယ်ပိုင်အစီအစဉ်များကိုပံ့ပိုးနေကြသည် ဤကိစ်စတှငျဘဝပိုမိုလွယ်ကူစေရန်။
1 ကျွန်ုပ်တို့၏ PC ၏မည်သည့်ရှုထောင့်များကိုစောင့်ကြည့်လေ့လာပြီး၊
2 Windows ဇာတိကိရိယာများ
3 MacOS ဇာတိကိရိယာများ
4 ကျွန်တော်တို့ရဲ့ PC ကိုစောင့်ကြည့်ဖို့အခမဲ့ software
4.1 HWiNFO: ကျွန်ုပ်တို့၏ pc ၏အပူချိန်ကိုရွေးချယ်စရာများစွာဖြင့်စောင့်ကြည့်ပါ
4.2 Rainmeter - သတင်းအချက်အလက်ဝစ်ဂျက်များနှင့်သင်၏ desktop ကိုကိုယ်ပိုင်ပြုလုပ်ပါ
4.3 MSI Afterburner ကျွန်ုပ်တို့၏ CPU နှင့် GPU အတွက် Overclock
4.4 EVGA Precision X1 - GPU overclocking အတွက်အကောင်းဆုံး
ကျွန်ုပ်တို့၏ PC ၏မည်သည့်ရှုထောင့်များကိုစောင့်ကြည့်လေ့လာပြီး၊
သင်ရုတ်တရက်အားလုံးဖြစ်ပျက်ခဲ့သည် သင့်ကွန်ပျူတာနှေးလာသည်သင်သည်အပူတပြင်းအလွန်ရလိုလျှင်သင်၏ hard disk သည်အချက်အလက်များကိုရေးသားခြင်းနှင့်ဖတ်ခြင်းများကိုမည်သို့ရပ်တန့်မလဲ၊ လျှောက်လွှာတစ်ခုဖွင့်ရန်သို့မဟုတ်အရာအားလုံးကိုရေးရန်ကြိုးစားလျှင်အလွန်နှောင့်နှေးနေသည်ဟုသင်ကြားသည်။ ဘာဖြစ်တာလဲ၊ ၎င်းသည်ပုံမှန်အားဖြင့် application များကိုခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်းမရှိခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကွန်ပျူတာပေါ်မှာ။
များသောအားဖြင့်၎င်းတို့သည်သေးငယ်သော application များဖြစ်သော်လည်းကျွန်ုပ်တို့၏အရင်းအမြစ်များစွာကိုစားသုံးကြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကွန်ပျူတာများတွင်သူတို့၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုစီတွင်အာရုံခံကိရိယာတပ်ဆင်ထားသည်၊ သို့မှသာရောဂါရှာဖွေတွေ့ရှိပါကအပြုအမူအားကျွန်ုပ်တို့သိရှိနိုင်မည်ဖြစ်သည် သူတို့တစ်ခုချင်းစီစီရဲ့ဒီတော့ဒီနည်းနဲ့ငါတို့ခံစားနေရတဲ့ပြfindနာကိုရှာတွေ့နိုင်တယ်။
CPU လှုပ်ရှားမှုဖြေ - ဒါကငါတို့ကွန်ပျူတာရဲ့ ဦး နှောက်ပဲ။ ငါတို့သုံးနေတဲ့အချိန်မှာအရာရာတိုင်းကိုအလုပ်လုပ်စေတယ်။ ဒီနေရာမှာငါတို့လုပ်နေတဲ့အရာကပစ္စည်းကိရိယာတွေရဲ့အရင်းအမြစ်တွေကိုပြည့်နှက်နေသလားဆိုတာကြည့်နိုင်တယ်။
RAM ကိုဖြေ။ ကျွန်တော်မှတ်ဉာဏ်စားသုံးနောက်ခံ applications များရှိပါက detect ကျွန်ုပ်တို့၏ကွန်ပျူတာကိုဆိုလိုသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းမရှိဘဲအချိန်ကောင်းကောင်းအသုံးချပါကဝက်ဘ်စာမျက်နှာကိုပြန်ဖွင့်စရာမလိုခြင်းဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ပွင့်လင်းသော ၀ င်းဒိုးအမြောက်အများနှင့်အလုပ်လုပ်ပါက၎င်းကိုတန်ဖိုးထားသည်။
သိုလှောင်ခြင်းနှင့် hard driveဖြေ - ဒီအပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့စက်ကိရိယာတွေရဲ့စွမ်းဆောင်နိုင်မှု၊ hard drive တွေရဲ့စာဖတ်နှုန်းနဲ့ဖတ်ရှုမှုနှုန်းတို့ဟာရောင်ပြန်ဟပ်နေတဲ့အပြုအမူကိုဖော်ထုတ်ပြသလိမ့်မယ်။
ဘက်ထရီနှင့်ပါဝါဖြေ - Motherboard ထုတ်လုပ်သူတော်တော်များများကဒီအပိုင်းအတွက်အထူးအစီအစဉ်တွေပေးတယ်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ကွန်ပျူတာ၏စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုကိုထိန်းချုပ်သည်ငါတို့လိုအပ်တာထက်ပိုပြီးစွမ်းအင်သုံးနိုင်တယ်။
ကွန်ယက်လှုပ်ရှားမှုနောက်ဆုံးအနေနဲ့ငါတို့မှာအင်တာနက်ကွန်ယက်ရဲ့လုပ်ဆောင်မှုရှိတယ်၊ ငါတို့ကွန်ပျူတာထဲကို ၀ င်ပြီးထွက်သွားတဲ့အချက်အလက်စီးဆင်းမှုကိုထိန်းချုပ်တယ်။ အချို့ ကျွန်ုပ်တို့မတော်တဆ install လုပ်သောပရိုဂရမ်များသည်သတင်းအချက်အလက်များကိုစုဆောင်းနေခြင်းဖြစ်နိုင်သည် ကျွန်ုပ်တို့၏အင်တာနက်ကွန်ယက်မှတစ်ဆင့်၎င်းကိုသတိမပြုမိဘဲ
အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့လိုအပ်သည်မှာကျွန်ုပ်တို့၏စက်ကိရိယာများကိုအခြေခံကျသောစောင့်ကြည့်စစ်ဆေးမှုဖြစ်ပါကတတိယပါတီအစီအစဉ်များကိုအသုံးပြုရန်မလိုအပ်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့အကောင်းဆုံးရယူနိုင်သောအရာမှာ Windows Task Manager ကိုယ်တိုင်ဖြစ်ပြီး၎င်းတွင်အရင်းအမြစ်သုံးစွဲမှုနှင့်သက်ဆိုင်သောသတင်းအချက်အလက်များကိုကျွန်ုပ်တို့ရရှိလိမ့်မည်။
ဒီအုပ်ချုပ်ရေးမှူးတွင်ကျွန်ုပ်တို့တွင်ရွေးချယ်စရာများပိုများလာသည်။ CPU၊ RAM၊ ပရိုဂရမ်များ၊ ၀ န်ဆောင်မှုများ၊ ကွန်ယက်နှင့်မကြာသေးမီကကျွန်ုပ်တို့၏ဂရပ်၏လုပ်ဆောင်မှုကိုထည့်သွင်းထားသည်။ တကယ်တော့တတိယပါတီတွေကတောင်မှဒီထက်ပိုပြီးပြည့်စုံတဲ့ပရိုဂရမ်တစ်ခုကိုရှာဖို့ခက်တယ်။ အကောင်းဆုံးကတော့အဲဒါကငါတို့ရဲ့လည်ပတ်ရေးစနစ်ထဲမှာအပြည့်အဝပါဝင်တယ်။
ဤပရိုဂရမ်၏အားနည်းချက်မှာဒီဇိုင်းဖြစ်သည်၊ ၎င်းသည်အစိတ်အပိုင်းထုတ်လုပ်သူများကကမ်းလှမ်းထားသောအရာများနှင့်လုံးဝမသက်ဆိုင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်၊ ကျွန်ုပ်တို့တွင်ဝစ်ဂျက်များကိုဖန်သားပြင်ပေါ်တွင်နေရာချခြင်းဖြစ်နိုင်ခြေမရှိသောကြောင့်၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အားအမြဲတမ်းသိရန်ပိုမိုလွယ်ကူစေသည် အချိန်နှင့်တပြေးညီအရင်းအမြစ်သုံးစွဲမှု။ ပရိုဂရမ်များ (သို့) ဗီဒီယိုဂိမ်းများကိုစမ်းသပ်လိုလျှင်ကျွန်ုပ်တို့၏အသင်းအပေါ်အဘယ်အကျိုးသက်ရောက်သည်ကိုမြင်လိုလျှင်အလွန်အသုံးဝင်သောအရာ။
OS X သည်အလွန်ပိတ်ထားသောစနစ်တစ်ခုဖြစ်သော်လည်း၎င်းအတွင်း၌ဖြစ်ပျက်မှုများကိုကျွန်ုပ်တို့အနည်းဆုံးထိန်းချုပ်နိုင်ပြီးဤနည်းဖြင့်အခြေခံအကျဆုံးစောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်းအချက်အလက်အားလုံးနှင့်ပတ်သက်သောသတင်းအချက်အလက်များကိုရရှိနိုင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်မည်သည့်ပြင်ပပရိုဂရမ်မှမပါဘဲလျှောက်လွှာနှင့်တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်နိုင်သည် စနစ်လှုပ်ရှားမှုမော်နီတာ။ ဘယ်ကျနော်တို့၏အပိုင်း၌တွေ့လိမ့်မည် "လျှောက်လွှာများ" ကျွန်တော်တို့၏ Finder ကို.
ဤလျှောက်လွှာတွင်အသုံးချပရိုဂရမ်များ၏စာရင်းကိုသူတို့သုံးစွဲမှုနှင့်အညီအချိန်နှင့်တပြေးညီရှာဖွေသည်။ CPU၊ RAM၊ ပါဝါ၊ disk နှင့် network။ ဒီကနေလည်းငါတို့လုပ်နိုင်တယ် အင်အားသုံးအနီးကပ် ကျနော်တို့သင့်လျော်သောထည့်သွင်းစဉ်းစားကြောင်းမဆိုလျှောက်လွှာ၏။ ဤနည်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်မည်သည့် application ကိုမဆိုပုံမှန်အသုံးပြုခြင်းကိုရှောင်ရှားပြီး၎င်းအစိတ်အပိုင်းများအားလုံးမှန်ကန်စွာအလုပ်လုပ်နေသည်ကိုစစ်ဆေးရန်ရောဂါရှာဖွေစစ်ဆေးမှုများပြုလုပ်လိမ့်မည်။
ဤအပလီကေးရှင်းသည်အမြဲတမ်းအဆင်သင့်ရှိနေသည်။ အထူးသဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ကိစ္စတွင် Mac သည်အသက်အရွယ်တစ်ခုရှိလျှင်၎င်းသည်အရင်းအမြစ်များကိုပုံမှန်မဟုတ်သောစားသုံးမှုကြောင့်ပြည့်နှက်နေခြင်းကိုပိုမိုထိခိုက်လွယ်စေသည်။ နောက်ထပ် အခြေခံအချက်အလက်များကိုပြသရန် doc အိုင်ကွန်ကိုကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုနိုင်သည် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ CPU ရဲ့လုပ်ဆောင်မှုဒါမှမဟုတ် hard disk ကိုဖတ်ခြင်းနှင့်ဖတ်ခြင်းကဲ့သို့ဖြစ်သည်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ PC ကိုစောင့်ကြည့်ဖို့အခမဲ့ software
ဤတွင်ကျွန်ုပ်တို့ကွန်ပျူတာတွင်ဖြစ်စဉ်များကိုစောင့်ကြည့်ရန်အခမဲ့ဆော့ဝဲလ်အနေဖြင့် developer များကကျွန်ုပ်တို့အားကမ်းလှမ်းသောအထူးပေါ်လွင်ချက်များရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့အတွက်အကောင်းဆုံးနှင့်အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်စေရန်အမြဲတမ်းမလွယ်ကူပါ၊ ။
HWiNFO: ကျွန်ုပ်တို့၏ pc ၏အပူချိန်ကိုရွေးချယ်စရာများစွာဖြင့်စောင့်ကြည့်ပါ
ဤပရိုဂရမ်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ကွန်ပျူတာပေါ်ရှိမည်သည့်လုပ်ငန်းစဉ် (သို့) parameter ကိုမဆိုဖတ်နိုင်စွမ်းရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ PC ၏ဟာ့ဒ်ဝဲအာရုံခံများအားလုံးထိန်းချုပ်နိုင်သည်။ CPU, GPU, VRM, Chipset၊ HDD အပူချိန်နှင့်ဗို့အားများ။ တစ်ခုတည်းသောအားနည်းချက်တစ်ခုမှာ၎င်း၏ပုံပန်းသဏ္ဌာန်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်အလွန်အလိုအလျောက်သိမြင်မှုမရှိခြင်းအပြင်မျက်စိအပေါ်အလွန်အမင်းလှသောသို့မဟုတ်လွယ်ကူခြင်းမရှိသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်သတင်းအချက်အလက်ပမာဏသည်အခြားမည်သည့်ပရိုဂရမ်နှင့်မျှမတူပါကဖြစ်သည်။
၎င်းသည်စျေးကွက်ရှိ Windows version အားလုံးနှင့်အတူအလုပ်လုပ်သည်။ XP မှ W10 သည် 32 နှင့် 64 bit နှင့်သဟဇာတဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်လုံးဝအခမဲ့ကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဤပရိုဂရမ်အမျိုးအစားကိုရှာဖွေနေသူမည်သူ့ကိုမဆိုကြိုးစားရန်ကျွန်ုပ်တို့အကြံပြုပါသည်။
ဤတွင် HWINFO ကိုအခမဲ့ကူးယူပါ LINK.
Rainmeter - သတင်းအချက်အလက်ဝစ်ဂျက်များနှင့်သင်၏ desktop ကိုကိုယ်ပိုင်ပြုလုပ်ပါ
အသုံးပြုသူများစွာသည်သူတို့၏ကွန်ပျူတာကိုစောင့်ကြည့်ရန်ရှာကြံရုံသာမက၎င်းတို့ကိုစတိုင်ဖြင့်ပြုလုပ်ရန်လည်းကြိုးစားသည်။ ဤပရိုဂရမ်ကဝစ်ဂျက်များကိုကွန်ပျူတာတစ်ခုလုံး၏စောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်းနှင့်သက်ဆိုင်သောသတင်းအချက်အလက်များကိုစားပွဲခုံပေါ်တွင်ထားရန်ကမ်းလှမ်းသည်။ အရာအားလုံးကိုထူးခြားတဲ့ဒီဇိုင်းဖြစ်စေတဲ့သူတို့ရဲ့အရောင်၊ အရွယ်အစားစတဲ့ဝစ်ဂျက်တွေရဲ့ဒီဇိုင်းကိုရွေးချယ်နိုင်ပါတယ် ငါတို့အကြိုက်ဆုံး။
ကျွန်ုပ်တို့၏ CPU နှင့်အခြားအစိတ်အပိုင်းများ၊ သူတို့၏အပူချိန်များကိုကျွန်ုပ်တို့စောင့်ကြည့်နိုင်သည်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ပိုင်နောက်ခံပုံများဖန်တီးရန်အတွက်အလွန်လွတ်လပ်သောပရိုဂရမ်တစ်ခုဖြစ်သည့်အပြင်အတိုကောက် icon bar များထည့်နိုင်သည်။
Rainmeter ကိုဤမှအခမဲ့ download လုပ်ပါ LINK.
MSI Afterburner ကျွန်ုပ်တို့၏ CPU နှင့် GPU အတွက် Overclock
သူတို့ရဲ့ GPU ကို overclock ချင်တဲ့ gamers တွေသုံးတဲ့သက်တမ်းကြာရှည်တဲ့ program ။ သို့သော်အသုံးပြုသူများအနေဖြင့်အများဆုံးရှာဖွေရရှိသည့်အရည်အသွေးမှာဗီဒီယိုဂိမ်းကစားစဉ် FPS ကိုစောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့် Hardware အားလုံးပေါ်တွင်တင်ခြင်းဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်အဆုံးမဲ့အချက်အလက်များကိုပေးထားပြီးရှိပြီးသား hardware အားလုံးနှင့်သဟဇာတဖြစ်သည်။ overclocking သည်အချို့သောကန့်သတ်ရှိပါတယ်။
၎င်းတွင် Rivatuner ပါ ၀ င်ပြီးဂိမ်းသတ်မှတ်ချက်များနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏စက်ပစ္စည်းများကိုဖတ်ရန်အလွန်ကောင်းမွန်သည်။ ကျနော်တို့ကစားနေစဉ်၎င်းကိုပြသရန်ပြည့်စုံသောစာရင်းအချက်အလက်တစ်ခုဖန်တီးနိုင်သည်။ အဆိုပါဗေဒအလွန်အယူအဆရေးရာသည်နှင့်အလွန်အလိုလိုသိဒီဇိုင်းကိုပေးထားပါတယ်။
ဒီကနေ MSI Afterburner ကို download လုပ်ပါ LINK
EVGA Precision X1 - GPU overclocking အတွက်အကောင်းဆုံး
ဤပရိုဂရမ်သည်အထူးသဖြင့်သူတို့၏ CPU နှင့် GPU တို့၏အသေးစိတ်စောင့်ကြည့်လေ့လာမှုကိုရှာဖွေနေသောအသုံးပြုသူများအတွက်ရည်ရွယ်သည် အကောင်းဆုံးဖြစ်နိုင်သော overclock လုပ်ဆောင်။ စျေးကွက်တစ်ခုလုံးတွင်ပိုမိုကောင်းမွန်သောအက်ပလီကေးရှင်းကိုရှာမရပါ။
၎င်းသည်ကြိမ်နှုန်းများ၊ စွမ်းအင်၊ အပူချိန်နှင့်ဗို့အားကဲ့သို့သောသတ်မှတ်ချက်များအားလုံးကိုစောင့်ကြည့်ပြီးဖြစ်သည် တစ်ခုချင်းစီကို Nvidia ဂရပ်ဖစ်ကတ်များကိုကျွန်ုပ်တို့ကြိုက်နှစ်သက်အောင်ပြုပြင်နိုင်သည်။ ဒီအစီအစဉ်နှင့်အတူ Overclocking ရိုးရှင်းပြီးလုပ်ရိုးလုပ်စဉ်ဖြစ်လာသည်။
EVGA Precision X1 ကိုအခမဲ့ရယူပါ LINK.
၎င်းသည်၎င်းနယ်ပယ်ရှိလူသိအများဆုံးပရိုဂရမ်များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့တွေ့ရှိနိုင်သောရှေးအကျဆုံးဖြစ်သည်။ ၎င်းနှင့်ကျွန်ုပ်တို့ကျွန်ုပ်တို့သည်ကွန်ပျူတာ၏အတွင်းပိုင်းအချက်အလက်များကိုရိုးရှင်းသောကလစ်အနည်းငယ်ဖြင့်ကိုင်တွယ်နေကြောင်းနက်နက်နဲနဲသိရှိနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
ဒါဟာပုံမှန်အားဖြင့်အသုံးပြုခဲ့သည် PC ဟာ့ဒ်ဝဲရဲ့အသေးစိတ်အချက်အလက်အားလုံးကိုသိထားပါအသုံးပြုသူများနှင့်ကျွမ်းကျင်သူများကသော်လည်း၊ ကျွန်ုပ်တို့စိတ်ဝင်စားသောအချက်မှာ၎င်းအစိတ်အပိုင်းများနှင့်၎င်းတို့၏အစိတ်အပိုင်းများကိုစောင့်ကြည့်နိုင်စွမ်းရှိသည် အချိန်မှန်စွမ်းဆောင်ရည် နှင့်အလွန်ထိရောက်စွာ။
ထို့အပြင်ကွန်ပျူတာ၏စွမ်းဆောင်ရည်ကိုအခြားသူများနှင့်နှိုင်းယှဉ်နိုင်သည့်အတွက်စွမ်းဆောင်ရည်ကိုသိရှိနိုင်ရန်လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုဆိုင်ရာစမ်းသပ်မှုများကိုပြုလုပ်နိုင်သည်။ လိုချင်သောအခါအလွန်အသုံးဝင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့ဝယ်ထားသောဟာ့ဒ်ဝဲကိုကျွန်ုပ်တို့ပိုင်ဆိုင်ထားနှင့်ပြီးနှိုင်းယှဉ်ပါ။ ကျနော်တို့တွေ့ရသည့်တစ်ခုတည်းသောအားနည်းချက်မှာဤသည်သည်ကျန်စာရင်း၏ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်သည် အခမဲ့မဟုတ်ပါဘူး
ကျနော်တို့ဗားရှင်းအများအပြားတွေ့ရှိခဲ့ထိုသူအပေါင်းတို့သည်အကြားအထိစျေးနှုန်းများနှင့်အတူပေးဆောင် 39,99 € ရောက်ရှိသောအရှိဆုံးအဆင့်မြင့်သူတွေကိုရန် 199,90 €။ ဤအရာအားလုံးကိုဤသည်၌၎င်း၏တရားဝင်စာမျက်နှာကနေ LINK.
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Gadget သတင်း » ကွန်ပြူတာများ » ကွန်ပြူတာစွမ်းဆောင်ရည်ကိုအခမဲ့စောင့်ကြပ်စစ်ဆေးသည့်ပရိုဂရမ်များ